Samaynta miisaaniyad si loo badbaadiyo lacag | USAHello | USAHello
Miisaaniyadda A waa qiyaasta inta lacag ee aad qabto bil kasta iyo inta lacag ee aad u baahan tahay inaad bixiso kirada, yutiilitida, cuntada, gaadiidka, dharka, iwm. Waxay kaa caawin doona inaad ogaado waxa aad ka isticmaali karto oo aan ordaya baxay lacag. Lahaanshaha miisaaniyad sidoo kale waxay sahlaysaa in la badbaadiyo lacag.
Sida loo badbaadiyo lacag, photo by Xarshaa KR, Creative Commons
Samaynta miisaaniyad macneheedu yahay in aad gacanta ku lacagtaada. Tani waxay si gaar ah muhiim, haddii aad ku nooshahay dakhli kooban. In USA, dad badan oo dad badan oo dhibaato lacag la galay sababtoo ah waxa ay in ka badan waxay kasban qaataan.
Sida loo sameeyo miisaaniyad
Samayso miisaaniyadda agagaarka jeegaaga. Ma aad bixisay todobaadle ah, laba todobaad kasta, ama aad bil kasta? Samayso miisaaniyadda ku dhawaad ​​muddo aad lacagta.
Qor dakhliga billaha ama todobaadle ah
Samee liis ah kharashka bil kasta ama todobaadle ah: cuntada, yutiilitida, kirada, rakaab bas ama amaah gaariga tusaale ahaan
Samee liis ah kharashyada kale ee aad bixiso: caymiska, biilasha dayactirka, kharashka iskuulka
Qor inta aad u baahan tahay inaad iska: tusaale ahaan waxaad u baahan doontaa lacag u dhigato xaaladaha degdegga ah iyo badbaadin kor u soo gato ama safarka
Ku dar qadar ah madadaalada ama waxyaabo kale oo aad rabto in aad ku qaataan on. Just xusuusan waa kuwa caqliga leh in ay iibsadaan waxyaabaha aad u baahan tahay ka hor inta waxyaalaha aad rabto in aad!
Haddii dakhligaagu ma daboosho kharashka oo dhan, miisaaniyada aan la dheeli. Haddii aadan kordhin kartaa dakhligaaga, waxaad u baahan doontaa inaad hoos u kharashka meesha aad awoodid.
Save the lacag iyo diiwaan geliyaan
Haddii aad leedahay qaar ka mid ah lacag hadhay ka dib markii kharashyada lagu daboolay, bilowdo kaydsi! Habka ugu fiican ee si loo badbaadiyo lacag waa by gashan shubo xisaabta kaydka. Waxaad isticmaali kartaa kaydka haddii aad leedahay xaalad degdeg ah. Khubarada ku talinaynaa in aad la abuuro fund deg-deg ah loo siman yahay ilaa lix bilood’ kharashyada ay dhacdo shaqo la'aan kugu dhacdo ama ku dhaawacmay. Ka dib markii aad dhisay fund deg-deg ah, ka dibna waxaad badbaadin kartaa lacag in la sameeyo wax madadaalo, sida tago fasax la leh qoyskaaga ama wax gaar ah ka iibsan.
Hubi in aad bixiso oo dhan biilasha waqtiga si uma baahnid in aad bixiso lacagta ujrada soo daahay. Hayso dhammaan rasiidhada iyo diiwaanada aad u muhiim ah sida aad ku bixisaan aad lacag hal sanduuq, khaanad ama file.
Credit loola jeedaa lacagta amaahashada ka bangigaaga ama credit union oo mar dambe dib u bixinta. Marka aad amaahato lacag la isticmaalayo credit, waxaad u baahan doontaa inaad bixiso dulsaar, ama lacag ah amaahashada lacagta.
Waxaa muhiim ah in ay bixiyaan oo dhan biilasha waqtiga si aad u ilaaliso credit. Haddii aad rabto in maalin maalmaha ka mid guri iibsato, laga yaabaa in aad u baahan tahay in aad isticmaasho credit. Waxaad baran kartaa dheeraad ah oo ku saabsan kaararka deynta iyo deyn.
Haddii aad go'aansato inaad hesho credit card, aad u baahan tahay in aad ka taxadartaa in ay bixiyaan biilasha gebi bil kasta. kaararka deynta waxay noqon kartaa mid waxtar leh, laakiin inta badan aad ka qaadaan xiisaha aad u sarreeya haddii aadan bixin off bil kasta. Ha ku qaataan lacag ka badan aad qabto!
Ka taxaddar marka aad bixinayso lacag dadka aanad garanayn, gaar ahaan haddii aad bixiso lacag caddaan ah. Waxaa fiican in la helo xisaab hubinta ee bangiga ama credit union ah si aad u bixin kartaa jeeg ka dibna aad leedahay caddeynta bixinta biilasha. Haddii aad qabto in lagu bixiyo lacag caddaan ah, had iyo jeer weydiiso rasiid si aad caddayn bixinta.
Waxaa jira qaar ka mid ah been-abuurka (tricks in ay khiyaameeyaan dadka) in bartilmaameedka dadka ku cusub dalka iyo si fiican ku hadlin Ingiriisiga weli. Haddii aad hesho mail ama email sheegay in aad u baahan tahay in ay bixiyaan lacag aad u badan ama in aad ku guuleysato lacag aad u badan, waxaa laga yaabaa in lagu gaday ama been abuur ah. Ka hubi xafiiska boostada, aad iskaa wax u qabso / mentor, ama saaxiib aad ku kalsoon tahay ama deriskaaga haddii aadan hubin.
Haddii aad tixgelinayso inaad iibsato ama la maalgashado, ama bixinta wax, waxa la aqbali karo si aad u codsato heshiis qoraal ah, ama in la yidhaahdo aad u baahan tahay inaad la hadasho qofka aad is qabtaan ama ku fikirno oo ku saabsan dalab ah. Ha dareemin cadaadis inaad bixiso xaddi weyn oo lacag la'aan waraaqo ama waqti si aad u weydiiso wixii talo ah.
In USA, qof walba waxaa loo baahan yahay in ay soo sheegaan by April 15 sannad kasta immisa dakhliga ay heleen in sanad ka hor. warkaan waxaa lagu magacaabaa canshuurta ah. Lagugu leeyahay laga yaabaa in canshuurta dakhliga in. Canshuurta waa lacagta in aad bixiso dawladda adeegyada dadweynaha aad hesho, sida dugsiga carruurta iyo waddooyinka wadato isticmaalka. Waxaad baran kartaa badan oo ku saabsan canshuurta iyo sida loo bixiyo canshuurta. Iyadoo ku xiran inta lacag ee aad ka dhigi, Si kastaba ha ahaatee, laga yaabaa in aad hesho soo celiyo (lacagta ka soo laabtay xukuumadda) on canshuurta aad horay u bixisay sanadkan gudihiisa.
Marka aad hesho jeeg, qaar ka mid ah lacag laga qaadi doonaa ka mid ah waxaa ka mid ah si ay u dedaan canshuur gaar ah. Cidda aad u shaqayso lacag ka jeegaaga dhawri doonaa in la siiyo dowladda adiga ku matalaya. Tani loo yaqaan cashuur ka haynta. Tan waxaa ku jira canshuurta gobolka iyo federaalka, caymiska shaqo la'aanta iyo ammaanka bulshada, taas oo ah kaydka hawlgabka ama naafada.
Tani waa jeeg muunad ka Fargo Wells ah “Hands on Banking” barnaamij.
Warbixin ku saabsan bangiyada
Sida loo bixiyo canshuurta
Baro maaliyadda shaqsi ah la Khan Academy